Caqabadaha ka jira caasimadda waxaa laga saaray mid mid | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKa-qaadista Caqabadaha Keli-ahaan One ee caasimadda
Ka-qaadista Caqabadaha Keli-ahaan One ee caasimadda
24 / 07 / 2012 06 Ankara, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Ankara Metropolitan, oo ka socota wadada baska, saldhiga tareenka ee dhismaha adeega, park to AŞTİ magaalada oo dhan si loogu diyaariyo fududeynta nolosha dadka naafada ah. Dhinaca kale, kooxuhu waxay isku diyaarinayaan in ay ka soo baxaan curyaanka kursiga curyaanka, dhinaca kale naafada loogu talagalay dariiqa ayaa sameynaya shaqo macquul ah.
deggan Ankara 38 kun gaadiidka 175 xorriyadda dadka naafada ah, taageerada daaweynta jirka, koonfeed, koorsooyin xirfadeed sida ku dadaalaya in ay ka saarto caqabadaha nolosha la apps degmada Metropolitan, ayaa hadda bilaabeyna olole magaalada oo dhan, dhinacyada waddooyinka ee waddooyinka waaweyn iyo kaguuraya, sare iyo ka hoose Goobaha, jardiinooyinka, musqulaha beeraha, dhismaha adeega, AŞTİ, basaska iyo nalalka taraafikada ayaa sameeya qabanqaabo cusub. Metropolitan bilaabay shaqada aaga dadka lugta hoose ee caasimada degmada Department of sharraxaadda Urban, oo ay ku jiraan muwaadiniinta naafada maraan ugu weyn ee ugu horeeya Boulevard iyo wadada la habaynayaa si ay u isticmaalaan oo dhan lugaynaya raaxo badan. Caqabadaha ay ka mid yihiin xafiisyada tigidhada, shaandhada, mishiinka korontada, dhoobka caleenta, saxanka jihaadka, taas oo yareynaysa dhaqdhaqaaqa dadka ku yaal waddooyinka waawayn iyo xaafadaha, waxaa lagu wadaa wadashaqeyn lala yeesho unugyada iyo hay'adaha la xiriira iyo in laga saaro ama loo wareejiyo meesha ku habboon. Kooxuhu waxay xaddidaan cajalad muuqaal ah oo aan ku xirneyn jaranjarrooyinka jaranjarada lugta iyo kuwa lugta la socdo waxay sii wadayaan shaqadooda si xoog leh uga bilowda Kizilay iyo Nuur si ay u sameeyaan jajabyo u dhigma jaangooyooyinka iyo in ay sameeyaan gogol cusub. Kooxaha, jidadka waawayn iyo muwaadiniinta aragtida dadka naafada ah si ay u guuraan si sahlan si ay u bixiyaan shaqo macquul ah oo la taaban karo. Degmada Metropolitan, oo horay u sii waday gawaarida 60 ee adeega mashiinka lugta ah si ay si fudud uga gudubaan waddada naafada, waayeelka iyo haweenka uurka leh, waxay riixday badhanka dhismaha wiishka ee dhibicda 18.
OBSTACLES HALKA ASTTI
Hawlaha lagu qabtay ASTTI, Xarumaha Dhaqanka iyo Xarumaha Dhalinyarada, ayaa lagama maarmaanka u ah aragtida aragtida. Iyada oo kaaliyaha kaaliyaha telefoonka lagu rakibay meelo kala duwan, muwaadiniinta naafada waxay wici karaan hagaha waajibaadka iyo inay raacaan meel kasta oo ay rabaan. Braille iyo Latin Alphabets ayaa lagu dhejiyaa kuraasta, la-talin, riwaayad, boolis, kafateeriya, meelo barbarro ah sida xarumaha muhiimka ah. Marka lagu daro, aragti ahaan naafanimadeeda, marka la samaynayo wadada ugu dambaysa ee wadada loo maro ee AŞTİ, khariidadda alfabeetada Braille ayaa lagu sharxay gudaha gawaarida, dadka naafada ahna waa la muujiyay.
Metropolitan Municipality ayaa sidoo kale qabanqaabin muhiim ah u leh dadka curyaamiinta ah ee beeraha. Jardiinooyinka, gawaarida, ballaca wadooyinka lugta, dhererka cawska, roogga iyo dabaqyada, daboolka dhulka waxaa loo keenay heerarka ku habboon gaar ahaan dadka naafada ah ee isticmaala kuraasta cuuryaamiinta. Inkastoo goobo badan oo lagu ciyaaro loogu talagalay muwaadiniinta naafada ah ee jardiinooyin badan, musqulaha ayaa la sameeyaa si loo gaaro heerarka ragga iyo dumarka.
Dhismaha Degmadu waxay noqon doontaa tusaale u ah dhismayaasha dadweynaha oo leh sharciyada naafada. laga baxo xaaladaha degdegga ah ee dhismaha, musqulaha iyo dareemay qolalka loogu talagalay go'yaal dhismaha halka gelinayn diyaarinta, musqulaha naafada ah dabaq kasta, qoraal laga helay wiishashka, nalal, warbixin maqal ah, badhamada call barbaro in raacaysa xeerarka dareenka.
XADGUDUBYADA BARNAAMIJYADA METRO STATIONS
Saldhigyada Ankar iyo Ankara, ayaa lagu daaweynayaa dareen macquul ah si ay u siiyaan muwaadiniin aragtiyeed oo naafo ah si ay u helaan saldhig kasta. Mashruucaan waxaa loogu talagalay in lagu rakibo dusha sare ee mitirka mitirka 623, 11 bin 500 tilmaan-bixiye mitir iyo 968 dusha sare ee mitirka digniinta si looga hortago in aragtida aan waxba tarayn ee ka soo horjeeda gidaarrada. Marka laga soo tago xarumaha 54 ee saldhigyada, xarumaha 24 waxaa lagu dari doonaa saldhigyada loo baahan yahay, iyo sidoo kale 4 cagajuglaha iyo 18 nooca qulqulka.
PLATFORM NAAFINTA LAGU HELAYO
Kaararka kaadhadhka bilaashka ah ee la dhimay iyo gaadiidka dadwaynaha ayaa si sahlan looga faa'iidaysan karaa, xoriyada gaadiidka ee muwaadiniinta naafada ah ee ku jira qaabka qorshaha wanaajinta. In raxan baska 70 la baabuurta naafada ah wiish hal tusaale oo degmada Metropolitan ee Turkey si dhakhso 250 low-dabaqa basaska cusub waxay qeexeen dari doonaa in gaadiidkan. Intaa waxaa dheer, dadaal ayaa loo socdaa si loo hubiyo in dhamaan gawaarida ay gaarto naafada naafada ah. Waxaa intaa dheer, diyaargarowga loogu talagalay bixinta macluumaadka maqalka iyo fiidiyowga ee maqalka iyo aragtida dadka naafada ah ee ku jira basaska oo sugaya baska joogsiga joogsiga. Waaxda Gaadiidka ee EGO, kaas oo rakibaya qalabka dhegaystayaasha ah ee lugta leh ee dadka lugta ku socda ee 42, sidoo kale waxay sii wadaysaa mudada nalalka iftiinka ee ku habboon qofkii gaabinaya.
Ka qaadidda 'Caqabadaha' ee Gaadiidka
Waddada Asfalt Waddooyinka Dhismaha ee Caasimada ayaa la fatahay
Caqabadaha ayaa ka baxaya Greater (PhotoGaleri)
Maqnaanshaha garoonka diyaaradaha
Caqabadaha hortaagan Canal Istanbul
Caqabado ayaa ku socda Gaadiidka
Caqabadaha Gaadiidka ee Gaziantep
Caqabado ka baxsan Bridge
Sabiha Gokcen iyo Tareenka Sare waxay ka hortagayaan duulimaadka ka soo jeeda Yenisehir!
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul ayaa furtay jidadka metrooga mid mid sanadkii 2013…
Sehitkamilde Xaafadaha ayaa si gooni ah u qalabaysan
Gebze-Darica Metro Dhirta dhoobada ah ayaa midba mid u guuraya
Kharashka Gaadiidka Dadweynaha
naasaha naafada ah
Maanta taariikhda: 25 July '2 Ağüstos 1925 Muddadii Süleyman Siriga Baade ee Nafia July